Bekopaka: Mitifitra ankitsirano, mampihorohoro ny miaramila
mercredi, 22 juillet 2020 10:52
Mahabe resaka ny fihetsika ataona andiana miaramila sasantsasany tato ho ato. Taorian’ny fandratrana olona tao Toamasina sy fitifirana tovolahy izay, 25 taona, tsy salama saina izay nitranga tao Andohan’Ilakaka dia tranga maromaro koa no andrenesana fitarainana any Bekopaka Distrika Antsalova.
« Nahazo fandrahonana ho faty ny tenako. Miaramila mitam-basy no manao izany. Imaso imaso, ary teo anatrehana Assistant parlemantera no nitenenana izany tamiko ny marainan’ny Alahady 19 jolay 2020 fa : omenay anao ny anjaranao raha mitady ianao », hoy i Francklin Miadrizoky.
Voatery nitsoaka ny tenako, hoy ity Ben’ny tanàna teo aloha tao Bekopaka ity. Voatery nisintaka ny tanàna nandeha moto ao Belo Tsiribihina ny tenany, ny alatsinainy teo, naneho ny alahelony tamin’ny horonantsary, ho « fanairana ny mpitondra fanjakana sy ireo ambaratongam-pifehezana miaramila » manoloana ny « fihoaram-pefy sy ny herisetra » ataon’ny miaramila sasany nalefa hampandry tany ao Bekopaka araka ny nambarany.
« Tsy manohitra miaramila, na mandà ny fisian’izy ireo hampandry fahalemana ao Bekopaka ny tenako, fa efa tafahoatra loatra ny herisetra amin’ny endrika samihafa sy ny fanimbazimbana ny hasina ataon’ny sasany amin’izy ireo, izay manimba endrika ny Tafika, ka tsy maintsy mijoro ny tenako hamaky bantsilana izany sy manaitra ny fanjakana handray andraikitra », hoy i Francklin Miadrizoky.
Notanisainy ny fanevatevana Sefo Fokontany sy ny naneren’ny miaramila azy io handady amin’ny tany, nitranga ny 12 jona 2020. Teo koa ny nitifiran’ireo miaramila ireo ankitsirano tovolahy iray noho ny resaka « clé USB », ka maty tsy tra-drano ny 19 jona 2020 ; manginy fotsiny ny famingavingana nahazo ny raiamandreny Sojabe tao Bekopaka ny 16 may 2020 nandritra ny fivoriam-pokonolona.
« Mahazo fandrahonana ireo niharan’ny herisetra mba tsy hitory ka miantso ny praiminisitra sy ny minisitry ny Fiarovam-pirenena ny tenako » hoy i Francklin Miadrizoky, satria « efa ela io olana io, miandry izahay aiza ny vahaolana inona no fepetra raisina ? ».